Frequently asked questions about financial support - isiXhosa | Covid-19 Response
Frequently asked questions about financial support - isiXhosa
Financial support - isiXhosa
Financial support - English
Financial support - Afrikaans
I-Covid-19 Support Finder yoshishino
Ukuncedisa amashishini afumane kwaye afake isicelo senkxasomali anokuyifumana, uRhulumente weNtshona Koloni, iSixeko saseKapa kunye neWesgro basungule isixhobo sokufumanela amashishini ingxowamali eNtshona Kapa.
Esi sixhobo sikwi-Intanethi simbuza umsebenzisi imibuzo emihlanu elula, silinganisele iimpendulo ngokuzithelekisa nekhrayitheriya esel' imiselwe njengoko kuchaziwe kumanyathelo ahlukeneyo oncedo, size sibonelele ngoluhlu lwamanyathelo oncedo lweshishini olunokusetynziswa. Le nkqubo ithatha ixesha elingaphantsi komzuzu: www.supportbusiness.co.za/covid-19-support-finder
Naliphi na ishishini eNtshona Koloni elidinga inkxaso neengcebiso lingaqhagamshelana neZiko loNcedo leCovid-19 ku- supportbusiness@wesgro.co.za .
Ngeenkcukacha ezithe vetshe, yiya ku- www.supportbusiness.co.za
Inkxaso ngezimali kuPhuhliso lwamashishini amancinci (SMMEs)
ISebe loPhuhliso lwamaShishini amaNcinci libhengeze ukuba ngomhla we-19 kuMatshi 2020 iDebt Relief Fund izimisile ukunceda amashishini amancinci achatshazelwe ngulo bhubhane wecoronavayirasi. IDebt Relief Fund jolise ekunikeni uncedo kumatyala asele ekhona neentlawulo zawo, ukunceda iSMMEs ngeli xesha leCovid-19 imeko yombulalazwe. Amashishini afuna uncedo mawabhalise kwiSMME South Africa portal kule dilesi: www.smmesa.gov.za, evule ngomhla wama-24 kuMatshi. UMphathiswa woPhuhliso lwamaShishini amaNcinci uKhumbudzo Ntshavheni ucebise ukuba amashishini eSMME angabhalisa kuluhlu lweenkcukacha (database) www.smmesa.gov.za ukusukela ngolweSibini umhla wama-24 kuMatshi 2020.
Ngokuthetha kukaMphathiswa woPhuhliso lwamaShishini amaNcinci uKhumbudzo Ntshavheni, iDebt Relief Fund ingasetyenziswa kumatyala, eemoto okanye amanye amatyala oshishino amashishini amancinci aya kuthi afune uncedo ngayo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe malunge neDebt Relief Fund nceda uye ku: www.smmesa.gov.za, oqalise ukusebenza ngLwesibini, umhla wama-24 kuMatshi 2020.
UMphathiswa woPhuhliso lwamaShishini amaNcinci uthe ngoLwesihlanu, umhla wama-20 Matshi ixesha lokubuya kweempendulo elijolise kwiintsuku ezisi-7, ukuba ububhalise kuSMME South Africa portal ku: www.smmesa.gov.za, evule ngomhla wama-24 kuMatshi.
Inkxasomali yecandelo lezokhenketho
ISebe lezoKhenketho longeze ama-200 ezigidi zeerandi ezikhoyo ukunceda iiSMME kwicandelo lezokhenketho kunye namashishini okwamkel' iindwendwe aphantsi koxinzeelo oluthile ngenxa yefuthe leCovid-19.
Ingxowamali le iza kulawulwa ngendlela yokuba makuxhamle iiSMME kuwo olithoba amaphondo kunye namacandelwana okhenketho ahlukeneyo.
Ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga nengxowamali, nceda uqhakamshelane neZiko loNcedo lweeNkonzo zoKhenketho ku-0860 TOURISM (868 747) okanye uthumele i-imeyili ku- callcentre@tourism.gov.za (Isebenza ukusukela ngo-08:00- 22:00, ngoMvulo-ngoLwesihlanu).
Yiya ku- www.tourism.gov.za ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Inkxaso mali elungiselelwe icandelo lezemidlalo, ezobugcisa nezenkcubeko
ISebe likaZwelonke lezeMidlalo, uBugcisa neNkcubeko libekele bucala i-R150 yezigidi zerandi ukuba incede kwiminyhadala ecinyiweyo, i-dijithal solution kunye nothotho lweeprojekhthi ebesele zilungisiwe.
Nceda uqaphele ukuba izicelo zokufumana oluncedo mali luyavalwa ngomhla we -6 ku April ngo 23:H59.
Ndwendwela ku www.dac.gov.za ngolwazi gabalala.
Isebe leMicimbi yeNkcubeko neMidlalo lase Ntshona Koloni nalo lithe lafaka isandla kwesisiqabu esiyakuthi sincede kwezenkcubeko kweliphondo, kwicandelo lezobugcisa nezemidlalo.
Nceda uqaphele ukuba izicelo zoluncedo mali luvalwa ngomhla we-19 kuMeyi ngentsimbi yesine -16h00
Funda kwiindawo zoluntu i media statement ngolwazi gabalala.
Download Frequently Asked Questions about this fund.
Inkxasomali yecandelo lezolimo
ISebe lezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba noPhuhliso lwaMaphandle lenze ukuba makufumaneke iR1.2 yebhiliyoni ukwenzela kakhulu amafama nabavelisi abasakhasayo abavelisayo njengangoku kwaye balungiselela izityalo zasebusika.
Nceda uqaphele ukuba izicelo zale ngxowamali zivaliwe ngomhla wama-22 kwekaTshazimpuzi ngo-16:00
Yiya ku- www.daff.gov.za ngeenkcukacha ezithe vetshe.
I-Covid-19 Temporary Employer-Employee Relief Scheme (COVID-19 TERS)
Ukunciphisa ifuthe lokumiswa ngxi kwezinto kwisizwe iintsuku ezingama-21 kubasebenzi, ushishino noqoqosho, iSebe lezaBasebenzi libhengeze ukwenziwa kwe Covid-19 Temporary Employer-Employee Relief Scheme (COVID-19 TERS) ukuxhasa amashishini angakwaziyo ukuhlawula imivuzo yabasebenzi bawo.
Abaqeshi abakhathalayo nabanoxanduva lokuba bakwazi ukuhlawula imivuzo epheleleyo yabasebenzi abahlalise phantsi ngenxa yempilo nangenxa yokhuseleko ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto, bayakhuthazwa ukuba bafake isicelo seCovid-19 TERS Benefit kwiUnemployment Insurance Fund (UIF) ngokuthumela i-imeyili ku- covid19ters@laabour.gov.za.
Baya kuthi bakuba beyithumele i-imeyili, abafaki-zicelo baya kufumana impendulo elungiselelwe ukuba iphendulwe ngumatshini (automated) echaza onke amanyathelo neenkcukacha, kuqukwa imigaqo elandelwayo ukwenza amabango eemfanelo ezo. Ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto, amabango afakwe ngesandla akayi kwamkelwa ngenjongo yokunciphisa ukusondelelana kwabantu nokunqanda ukunwenwa kweCovid-19.
I-Covid-19 TERS Benefit ayahlulwanga kwezinye kwenye i- UIF Benefits nakwezinye iinkqubo, nakuba kunjalo izicelo ziya kuqinisekiswa ngokwenkqubo yengqinisekiso yeNgxowamali.
I-UIF inenombolo yehotline: 012 337 1997 yeCovid–19 TERS Benefit yokubuza xa unento ofuna ukuyiqonda ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ngena ku www.labour.gov.za ufumane ezinye ezinye iinkcukacha.
Inkqubo ye- Industrial Development Corporation (IDC)
I-Industrial Development Corporation (IDC) zidibene zenza umgodlo kunye neSebe lezoRhwebo, Imveliso noKhuphiswano ongaphezulu kweR3 bhiliyoni ukuxhasa ngezimali urhwebo ngemveliso ukujongana nemeko yemizi-mveliso esemngciphekweni nokuxhesha inkqubo yobonelelo ngemali amashishini abalulekileyo kwiinzame zethu ukulwa ivayirasi nefuthe layo kwezoqoqosho.
Kuya kubakho isibonelelo kubanini bamashishini amancinci oMzantsi Afrika.
I-IDC yenze iinzame ezimbini zokunceda ngokungelela:
1. Kubekelwe bucala iR500 miliyoni yokurhwebelwano (trade finance) ngokuthumela iimveliso eziphambili zamayeza kwamanye amazwe;
2. Kubekelwe bucala iR700 miliyoni yokuxhasa iworking capital (amandla elinawo ishishini ekubeni liqhubeke likhula lityala imali nangexesha lobunzima), kunye nezixhobo ndawonye noomatshini.
Ukongeza koku i-IDC isebenza kunye nabadlali-ndima ukukhawulelana nezona zinto zifuneka ngamandla:
•Ukuqinisekisa ukuba ukutya kukhona yaye kwanele ngokuthi kunikwe inkxaso ephambili kwezoLimo namakhonkco abadlali-ndima ekuveliseni nasekuthumeleni iimveliso zokutya eziyimfuneko (food value chain):
• Icandelo lezoKhenketho liyayixhasa i-working capital
• Imali-mboleko yexeshana ukunceda kwiimfuno ezingxamisekileyo zeshishini (bridging finance) yokuxhasa izinto ezithe zaphazamiseka kwinkqubo yentengo (supply chain)
• iWorking Capital yokuqinisekisa ukuba i-energy security ( izinto/amaseko ezingundoqo okuphila nayimfuneko elizweni nathi axhase amanye amazwe angayi kukhawuleza aphele naphantsi kwaziphi na iimeko) ikhona kubaniki-maseko (suppliers) ane-energy esisiseko/engundoqo
• iWorking capital neBridging Finance ukuya kwii-SME zibonelela iikhomponenti zabenzi beemoto.
Iinkonzo eziphambili ezingekho phantsi kwamacandelo e-IDC ziya kunikwa ingqalelo ukuze zixhaswe ngemali njengenyathelo ezinalo kungoku nje, eliya kuthi libhengezwe kwikota ezayo.
Abaxhamli nkonzo (clients) asele bekho, i-IDC sele ilungele ukuhlangana namahlakani ayo ezoshishino ukuqwalasela ulibaliseko ekuhlawulweni kwemali kwiimeko ngeemeko.
Ngena ku www.idc.co.za ufumane zinye iinkcukacha.